Njengoba kuzodlala i-Madrid ne-Liverpool uRamos noSalah bazobe bengekho | Scrolla Izindaba
Njengoba kuzodlala i-Madrid ne-Liverpool uRamos noSalah bazobe bengekho
Ngenkathi uSergio Ramos noMohammed Salah begcina ukuhlangana kwakuwumdlalo wamanqamu we-EUFA Champions League ngowezi-2018, futhi akuzange kuphele kahle ku-Liverpool noma kumgadli wabo wase-Egypt.
USalah waphoqeleka ukuba aphume enkundleni ngemuva kwemizuzu engama-30 edlaliswe kabi uRamos, owamuphula intamo. I-Liverpool yehlulwe kulowo mdlalo ngamagoli amathathu kwelilodwa.
USalah kungenzeka abe nomuzwa wokuthi kuyithuba lokuziphindisela kuRamos emdlalweni obekulindeleke ukuthi ube e-Estadio Alfredo Di Stefano e-Madrid ngoLwesibili.
Ngeshwa kwabaseGibhithe, i-Madrid isimemezele ukuthi ukaputeni wayo uRamos ulimele umsipha, kanti umdlali wasemuva manje kulindeleke ukuthi aphuthelwe imidlalo inyanga yonke kubandakanya yonke imidlalo ne-Liverpool.
I-Madrid isivele ayinabo abadlali ababezovula inkundla uDani Carvajal, u-Eden Hazard, uToni Kroos noFede Valverde.
Khonamanjalo, i-Manchester City izokwamukela i-Borussia Dortmund enenkani e-Etihad Stadium ngoLwesibili. I-Citizens izothemba ukuthi ifomu yabo enhle kwi-English Premier League izobasiza ukunqoba amaJalimane.
Umqeqeshi uPep Guardiola kulindeleke ukuthi abize uJohn Stones, IIkay Gundogan, noPhil Foden abebesebhentshini ngesikhathi i-City inqoba ngamagoli amabili eqandeni ibhekene ne-Leicester City ngempelasonto. UGuardiola ugcizelela ukuthi kudingeka ukuthi aqhubeke nokushintsha uhlangothi lwakhe ukuqinisekisa ukuthi bagwema ukutubeka.
Abadlali abafana noRaheem Sterling noSergio Aguero kulindeleke ukuthi babambe iqhaza elibalulekile kulo mdlalo ngokwazi ukuthi noma yini engaphansi kokunqoba ingababangela inhlekelele.
Umthombo wesithombe: @Liverpool